Ibekwe kumgama omfutshane ukusuka eLake Geneva, ulwandle, ukuqaliswa kwesikhephe, iivenkile zepaki kunye neevenkile zalapha ekhaya eli khaya liphefumlelweyo lamkelekile! Eli khaya livulekileyo livulekileyo linazo zonke izinto ezibalulekileyo ezisendulini ezinombono wechibi kunye nedesika ebanzi yangaphambili ukuze ukonwabele. Ucingo lwepikethi emhlophe lusonga inxalenye yeyadi engaphambili kunye nomngxuma omhle womlilo ukuze ufudumale ngeentsuku ezipholileyo.(*Eli khaya linezinyuko kwaye AKUNJALO kufikeleleke kwisiphene.)
Sinika iindwendwe zethu izinto ezibalulekileyo ukwenza ukuhlala kwakho kubengcono! Ukusetyenziswa kwakho kukho iitawuli, i-TP, isepha yesandla, isepha yesitya kunye nesiponji esitsha, izitya, iikomityi, iimbiza kunye neepani, izinto zokupheka kunye ne-cutlery, i-ayini kunye nesomisi seenwele. Iinkonzo zokuhlamba ziyafumaneka kufutshane edolophini.
Kufuphi lunxweme loluntu, ukuqaliswa kwesikhephe, ipaki enezixhobo zebala lokudlala kunye nepheyile yepikiniki ukuze uyonwabele. Kukho iivenkile ezininzi zalapha ekhaya, iiresityu, iinkonzo ze-spa kunye nethala leencwadi oza kuphononongwa ngalo. ILake laseGeneva libonelela ngendlela yechibi apho unokuhamba ujikeleze inxalenye okanye ichibi lonke (malunga neekhilomitha ezingama-26).
Ukuba ufuna nantoni na ngexesha lokuhlala kwakho okanye ukuba unayo nayiphi na imiba abanini bakufutshane kwaye bafumaneka ngokulula.